Tusaha Soo-Saarayaasha - Soo-saareyaasha & Tusayaasha Soosaarka Soosaarka - Alietc B2B
Haddii aad ka ganacsato alaabada la soo saaray ama alaabada ceeriin, ku soo biirista Suuqa dijitaalka ee Alietc ganacsiga uun bay ku fiicnaan karaan. Adiga ganacsiga alaabada macaamiisha sida alaabta lagu ciyaaro, dharka or kushiinka jikada, ama wax ka qabashada waxyaabaha ceeriin sida bauxite iyo potash, ilaa dharka iyo balaastikada.
In ka Suuqa B2B, alaab-qeybiyeyaashu waxay dagan yihiin hanti qaas ah oo ka duwan taas soo saarayaasha kuwaas oo iibiya alaabadooda, ama iibsadayaasha, kuwaas oo kaliya iibsada alaabada, iibiyeyaasha samee labadaba, taas oo micnaheedu yahay haddii aad alaab iibiyaha tahay, Alietc laba jibaar ayey ugu tahay ganacsigaaga.
Farxadda ku jirta ka ganacsiga Alietc waa haddii aad haysatid alaabo aad iibiso, waxaan kaa caawin doonnaa inaad hesho iibsadeyaal dhab ah oo aad rajeynayso inaad bilowdo xiriir muddo dheer iyo is-afgarad leh. Ujeedadayadu waa inaanu isla qaadano alaabada aad raadineyso inaad iibsato. Naga B2B madal si taxaddar leh ayaa loogu talagalay si loo hubiyo in dhammaan baahiyahaaga iibsade ama iibiya la kulmi doono si hufan, oo hufan.
Si tan loo sameeyo, waxaan ku siin doonnaa dhammaan qalabka aad ugu baahan tahay farahaaga oo waxaan ku siin doonnaa hagis iyo talo fara badan. Haddii aad tahay ganacsade khibrad leh ama aad hadda tahay adduunka ka shaqeynta alaab-qeybiye ahaan, waxaan si weyn kuugula talineynaa inaad aqriso 'Tilmaamaha Sahayda' maadaama ay ka buuxaan macluumaad faa'iido leh oo kaa caawinaya inaad waqtiga ugu badan la isticmaasho. noo jooga Alietc.
Waxaad u baahan tahay inaad sameyso marka xigta
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad saxeexdo mid ka mid ah kuwayada qorshayaasha xubinnimada
Markaad isqorto Alietc, waxaad markaa awood u yeelan doontaa inaad abuurto astaantaada.
Fadlan waqti yar qaado si aad u abuurto muuqaal indhaha soo jiidan kara oo rafcaan u noqon kara macaamiisha ama macaamiisha - waxaan abuurnay Tilmaamo waxtar leh oo Abuuritaanka Profile-kaaga Alietc kaasoo si buuxda ay xubnuhu heli karaan. Iyada oo ay la socdaan tilmaamayaasha kale ee muhiimka ah ee adeegsada, tusahaaga abuurista tusmada ayaa kaa caawin doona inaad ku garaacdo dhulka orodka oo waxay kaa badbaadineysaa inaad lumiso waqti aan loo baahnayn.
Bilow Iibsashada ama Iibinta!
Aan ku bilowno waxaad u baahan tahay inaad sameyso haddii aad haysatid alaabo iib ah
Liistada alaabada (yaasha) iibka ah. Markaad liistid alaabadaada, kuma soo darin qiimaha. Sababta qiimaha aan loo soo bandhigin waa sababta oo ah waxaan aaminsanahay in awooda kartida gorgortanka iyadoo lagu saleynayo tiro doorsoomayaal ah ay aad waxtar u leedahay uguna gaarto natiijooyin wanaagsan soo saareyaasha iyo iibiyaashaba. Cabbirka iyo waqtiga-waa labo doorsoomayaal ah oo si weyn saameyn ugu yeelan kara qiimaha halbeega, marka macno malahan inaad naftaada ku xakameyso hal hal, qiime go'an. Dhammaan alaabada la taxay waxaa ku jiri doona codsi ah “Soo-saare la xiriir” codsi iibsadeyaasha si ay u adeegsadaan furitaanka wadahadalada. Isku soo wada duuboo, dalabkaas wuxuu noogu imaan doonaa halkan Alietc isla markaana markaan qiimeynno ansaxnimada iibsadaha, waxaa lagu siin doonaa faahfaahinta xiriirka aad iska leedahay markaa waxaad xor u tahay inaad toos ula xaajooto iibsadaha.
Hubi Codsadaha Wax iibsadaha. Si ka duwan suuqyada kale ee dijitaalka ah, Alietc wuxuu ku dhiirrigeliyaa iibsadayaasha inay soo dhejiyaan codsiyada alaabada. Waxay kuu sheegi doonaan inta badeecado ee ay rabaan iyo goorta ay u baahan yihiin dhalmada. Kadib waxaad samayn kartaa 'bid'. Taasi waa sahlan tahay! Haddii aad dareensan tahay inuu iibsaduhu ka tegey wixii macluumaad muhiim ah, waxaan kula xiriiri karnaa iibsadaha si aad u dhuujisid faahfaahinta ganaaxa.
Hadda, waa kuwan waxaad u baahan tahay inaad sameyso haddii aad haysato liistada alaabooyinka aad rabto inaad iibsato.
Tallaabadaada ugu horreysa ayaa ah inaad raadsato alaabada aad rabto inaad soo iibsato iyo, muhiimad ahaan, soo-saaraha iyo alaab-qeybiyeyaasha alaabooyinkaas
Gudbi Codsi Iibsashada Alaabta. Waad u adeegsan kartaa mashiinkeena raadinta xoogga leh si aad u hesho soosaarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha badeecada aad raadineyso oo aad u gudbiso “Codsi Iibsasho Alaabta”
Dhig baloogyada Waxaad ku dalban kartaa dalab alaab kasta oo ku liis-garaysan iibka aaladda Calietc
Gudbi Codsi Badeecad. Waad gudbin kartaa codsi badeecad, oo aad ku caddeyso waxa badeecooyinka (yaasha) aad raadineyso inaad iibsato iyo waxaad u diyaarsaneyso inaad ku bixiso (iyaga) - alaab-qeybiye kasta / soo saare oo bixin kara badeecada (yaasha) aad tahay raadinta ayaa heli doonta ogeysiin deg deg ah oo ku saabsan dalabkaaga badeecada ka dibna xiriir ayey la sameyn doontaa haddii sicirka aad raadineyso inaad bixiso ay daneynayso iyaga.
Qaabkaaga ugu horeeya ee soo-saaraha / alaab-qeybiye kasta ayaa marwalba soo mari doona Alietc si aan u hubin karno ansaxnimada dalabkaaga. Marka aan ku faraxsanahay inaad tahay ganacsi dhab ah ama shaqsi ah, markaa codsigaaga waxaa loo gudbin doonaa soo-saaraha / alaab-qeybiye, oo ay la socdaan faahfaahinta xiriirkaaga, laga bilaabo markaa waxaad toos ula shaqeyn kartaan midba midka kale.
Halkan Alietc hal shay oo aan hore u baranay waa in heshiisyada ugu fiican ay badanaa ka yimaadaan natiijada gorgortanka. Tani waa gaar ahaan kiiska meesha ay ka jirto mug weyn ama suurtagal amarro soo noqnoqda oo joogto ah. Waxaa jira arrimo badan oo u baahan in la tixgeliyo marka laga hadlayo heshiisyada gorgortanka.
Tallaabadaada ugu horeysa waa inaad liis garaysato alaabada aad iibka ku leedahay isla markaana ku martiqaadaan dalabyada soo iibsadayaasha kartida leh iyo kuwa doonaya. Waxa kale oo aad ku qori kartaa badeecada qiimo go'an haddii aad doorato.
Midda labaad, waad ka baari kartaa xog uruurinteena ballaaran ee xubnaha kuwaas oo raadinaya inay iibsadaan badeecada aad iibisay, ama kuwaa soo iibsaday, ama alaabada la midka ah, waqtiyadii hore. Waxaad markaa u diri kartaa sicir aad awoodid inaad u siiso wax soo saarka (yada) ay raadinayaan.
Fadlan ogow: Si loo hubiyo in qof kasta oo adeegsada suuqa suuqa Alietc uu sidaas ku sameeyo samir buuxa oo ay ka dhex shaqeyso suuqaas, iyadoo kuxiran heerka xubinnimadaada, waxaa laga yaabaa inaad bixiso liisaska yar ama khidmada qandaraaska. Hadafkayagu waa in meesha laga saaro 'spam' iyo isticmaaleyaasha aan khatarta ahayn barta dhexdeeda, tanina waxay caddeysay inay tahay habka ugu waxtarka badan. Tan waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan oo dheeraad ah qaybta xubinnimada.
Alietc - Waxbadan Ayaa Ka Badan Meel Suuq Digital ah
Q-FIT SDN. BHD.
Products: Basin Top Basin, Golaha Musqusha
Products: bariis, basbaas madow, miraha la qalajiyey, warqada bariiska, cinanmon
Products: Beam Moving Head Light, Par Led Par Laydhka, Battery Powered Smart Light, LED Wall Washer, Blind Light
Qi Long Amusement Qalabka Co., Ltd.
Products: Producción y venta de alimentos y juguetes
Products: Badeecada Guud, Qalabka Dugsiga, Caafimaadka & Qurxinta, Riwaayadaha, Qoyska
Products: DUKAANKA TROLLEY, GAARI, DAMEERKA DUKAANKA
Qimei (USA) INC
Products: Dhar (Polyester Fabric, Sandwich Mesh Fabric, Barkin barkimo, Barkimo, Furaash)
Qalabka Mashiinka Qinding (shandong) Co., Ltd.
Products: weelka maraakiibta, weel gaar ah, qaybaha weelka, weelka guriga, weelka kore ee furan